Tallaabada xigta ee loogu talagalay SharePoint Career: Maareynta & Horumarinta
Tallaabada xigta ee loogu talagalay Shaqada SharePoint
Sidan, waxaad haysataa xaaladaada SharePoint oo loogu talagalay iyo murugo sida bisad yar. Maamulayaashu waxay kugu amrayaan isbedel weyn oo ku saabsan dadaalka isku-dubbaridan, iyo intaa waxaa dheer awoodda si ay u helaan xog muhiim ah meel kasta. Waxaad kasbatay wax yar oo dadka kale ah.
Xaalad ahaan, waraysiga caadiga ah ayaa qaadan doona ...
Miyaa laga yaabaa in shabakada la casriyeeyo muuqaalka ururkeena?
Tani miyay ku dhex mari kartaa barnaamijkeena kale?
Miyaa qaabsocodyada loo dejin karaa yoolka ah inuusan u baahnayn inta isku diyaarsan tahay?
Waxay u shaqeyneysaa sida ay u muuqato inay tahay, haddana waxay noqon kartaa cabbir aad u wanaagsan haddii ...
Jawaabaha su'aalahan waxay si joogta ah ugu guuleysteen qaybta canshuurta ee maamulaha oo waxay u baahan tahay inaad xirto dusha sare ee naqshadeynta, marxalad kasta oo muddo ah. Noqo siduu u kici karo, xajin ... adigu maahan naqshadeeye.
Horumar miro leh oo lagu hagaajin karo waa nidaam qaddarin ah oo u muuqda inuu u muuqan karo inuu kordho markii hore, hase yeeshee waa ku filan tahay in la wajaho nidaam habboon iyo diyaarinta saxda ah. Adoo ku guuleysta Microsoft MCSD: Shahaadeynta Dhismaha Dhismaha, adigu waad isku hagaajin kartaa si aad u xakamayso marxaladaha adag ee kakan ee hagaajinta SharePoint. Abaalmarin ahaan, waxaad ku dallacdaa qaar ka mid ah amniga ganacsiga muhiimka ah. Waa xaqiiqda la isku hallayn karo SharePoint injineeradu waa wax aan caadi aheyn xilligan.
Iyadoo aan loo eegin haddii aad ka shaqeyneyso nidaam keli ah ama SharePoint beerta, adiga oo aan shaki ku jirin saacado aan la tirin karin kheyraadka ku diyaarsaneynta xaaladaada adeeggaaga si aad isugu duwo baahiyaha ururka. Tababarka Tani waxay ku saleysan tahay qaabka ugu wanaagsan ee SP ah, markaa waa fursad wayn oo loo maro horumar. Adiga oo dhan waxaad leedahay dusha sare si aad u fahantid sida ay tahay SharePoint hawlaha iyo waxa ay ujeedadiisu tahay ururkaaga.
Inta badan wakhtiga, waxaa jira awood ay ku jirto SharePoint oo aan u baahneyn wax koodh. Waxay noqon kartaa qashin lagu dhisayo nidaam caadiyo ah marka awoodda hadda jirta ay ku jirto gudaha SharePoint lafteeda. Khadadkaas oo dhan, waa feker caqli ah si loo helo habab adag oo ku saabsan qaabka hagaajinta ee xiisaha leh SharePoint, tusaale ahaan, ururinta bogga, codsiyada, gelitaanka, layers, iyo diiwaanada. Waa inaad sidoo kale isweydaarsataa qalabka isbedelka SharePoint, Microsoft Office SharePoint Designer. Waxay xoojinaysaa habka kala duwan ee loo baahan yahay in loo baahan yahay barnaamij aan wax fulineynin.
Waad ku kobcin kartaa fikradahaaga fasalada SharePoint-ga gaarka ah. Koorasyadani waxay kuugu dhejinayaan inaad ku dhaqaaqdo horumarinta SharePoint adoo xaqiijinaya in aad haysato heer faham ah oo muhiim ah si loo abuuro habka wax ku oolka ah ee loo adeegsan karo SharePoint:
Shirkadda Microsoft SharePoint Server 2013 70-331 waxay ka kooban tahay aasaas aasaasi ah iyo habayn. Iyadoo aan loo eegin suurtagalnimada in aad hadda wax badan oo ka mid ah macluumaadkaan aad u dhigtay dhaqdhaqaaqa, waxaad faa'iido u yeelan kartaa fahamka kordhay ee fahamkoodu yahay koorsadan.
Markaad diyaar u tahay inaad ka soo baxdo SharePoint Padawan ilaa Jedi Master, koorsada Microsoft SharePoint Server 2013 70-332 oo aad u kordhay! Waa qorshe aan caadi ahayn oo ku saabsan hirgelinta iyo hirgelinta xalal khaas ah, oo ay ku jiraan maamulada shabakadaha ganacsiga si ay u xariiriyaan SharePoint hababka kale ee xogtaada.
Abaalmarin ahaan, labadaba koorsooyinkaani waxay kuu dejinayaan imtixaannada la xiriira ee Microsoft oo ku saabsan fursadda aad u rabto inaad ku darto MCSE-ga: Ururinta waxsoosaarka.
Kuwa soo socda ayaa u socdaalaya MCSD: Shahaadada Dhismaha Macmiilaha waa inuu helo a MCSA: Codsiyada Webka ama MCSA: Shirkadda Universal Windows Platform cert. Waxaad dooran kartaa, labaduba waxay ku xiran yihiin hagaajinta SharePoint. Dhab ahaantii, waxaa laga yaabaa inay u muuqato in ay raacdo labadaba.
Waxaa jira laba imtixaan oo loo baahan yahay in la helo Shahaadada MCSA, waxaadna u baahan doontaa waxyaabo badan oo aad u badan oo diyaarinaya iyo gacan-qabasho gacmeed si loo qaado faham ku filan ASP.NET or C # barnaamijka. Visual Studio wuxuu kuu sahlayaa inaad soo dejiso tusaalooyinka codsiyada SharePoint, iyo Microsoft waxay ku siinaysaa tabobarro daboolaya xaalado kala duwan oo la fahmi karo. Iyada oo qalabkaas wax lagu barto, maamule guuleysta sida naftaada ayaa xoojin kara waxqabadkaaga horumarkaaga ee isha.
Marka tani macnaheedu dhammaato, waad buuxin kartaa Isticmaaliyaha Dhismaha shahaadada adigoo gudbinaya imtixaanka Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions. Imtixaankani waxa uu diirada saarayaa isticmaalka labada barnaamijyada iyo xalalka looma baahna si aad u qurxiso meeleynta SharePoint ee baahiyaha ururka.
Waddada ilaa Shahaadeynta Aaladda Macmiilaha wuxuu noqon karaa waayo-aragnimo wax-ku-ool ah oo mushahar ah. Arrimaha mar horeba u muuqday in ay yihiin kuwo aan la xallin karin hadda waxaa lagu xallin karaa oo kaliya dhowr khadadood oo ah koodh. Waxaad ku xiran kartaa aqoonyahankaaga cusub si farxad leh iyada oo ururkiinu faa'iido u yeelanayo!
Microsoft ee Surface Laptop gudaha Windows 10 S: Tilmaamyada, Qiimaha iyo sifooyinka